दशैँको सम्झना - Enepalese.com
विजय बगाले २०७८ असोज २४ गते १६:०८ मा प्रकाशित
दशैंको सम्झना । बिगत केही बर्ष देखि निरन्तर यही कुरा दोहोराउॅंदै आएको छु । यो बर्ष पनि यही पुरानै स्टाटसले निरन्तरता पाएको छ ।
निकै चर्चित धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल डहरे देवी देउराली मन्दिर,अर्जुनचौपारी गाउँपालीका ५ स्यांग्जा आरुचौर मा रहेको छ । जुन मन्दिरको महिमा पर्यटकीय हिसावले बाह्रै महिना सफा,सुन्दर,मौसम अनुसारका ढकमक्क लाली गुराँसको लह-लह सॅगै,हिमाली मनमोहक दृश्यले त लोभ्याउॅंछ नै ,त्यसैमा पनि दशैं र वाल चतुर्दशी धार्मिक हिसावले समेत बिशेष मान्ने गरिन्छ ।
स्मरण रहोस,यो समुन्द्र सतह देखि २२०० मि. को उचाईमा अवस्थित छ । यो स्थानबाट स्याङ्जा जिल्लाका धेरै ठाउॅंहरु लगायत पोखरा,पर्वत,बागलुङका समेत अधिकांश ठाउँहरु सजिलै देख्न सकिन्छ ।
अहिले त अझै भनौ । दुबै तर्फ बाट यानेकि स्याङ्जा तर्फबाट र पर्वतको कार्किनेटाबाट उक्त स्थानमा मोटर गुड्छ । अहिले यो मन त्यही पुगेको अनुभूति गर्छ । भौगोलिक हिसावले त्यो ठाउँबाट टाढा रहे पनि अत्मियताले यो मन त्यही वरिपरी डुलेको छ । तिनै साथी भाई,तिनै आफन्त र तिनै दाजु-भाई सँग छ, यो मन ! हो,तिनै साथी-भाई सँग छ,यो मन !!
संम्भव भएसम्म दशैंको बेला एक पट्क पुग्ने प्रयास गर्नु होला । यो दशैंमा म आउन पाईन,अर्को दशैंमा आउने भरपुर प्रयास गर्नेछु ।
दशैंको सबैमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!